प्रचण्डलाई ‘मिस’ गर्दै दुर्गा प्रसाईंले भन्नुभयो, ‘…तर पछुतो छैन’ « Yo Bela
प्रचण्डलाई ‘मिस’ गर्दै दुर्गा प्रसाईंले भन्नुभयो, ‘…तर पछुतो छैन’
झापा– चर्चित मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंले नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लोभिपापीको झुण्डबाट बाहिर निस्कन आग्रह गर्नुभएको छ । कुनै बेला प्रचण्ड निकट मानिने बि एण्ड सी कलेजका प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईंले लोभिपापीहरुले घेरिदै गएपछि प्रचण्डलाई असली नेता कार्यकर्ताहरुले साथ छोड्दै गएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री विरुद्ध अनेक तिकड्म र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि आफूले प्रचण्डको साथ छोडेको प्रसाईंले यस अघि नै बताउँदै आउनुभएको छ ।
मन्तव्यको सुरुमै प्रचण्डलाई ‘मिस’ गरेका प्रसाईंले आजको भव्य कार्यक्रममा उहाँको उपस्थिति नुहनुका विभिन्न कारण रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईंले आजको कार्यक्रममा प्रचण्डलाई किन सहभागी गराइएन भनेर विभिन्न तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रचण्डलाई नेता कार्यकर्ताहरुसँग सम्बन्ध बिगार्न नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रमुख भूमिका रहेको उहाँले संकेत गर्नुभएको छ । लिखित मन्तव्यमा पटक पटक ‘काजी’ भनेर सम्बोधन गर्नु भएका उहाँले प्रचण्डलाई घर न घाटको बनाउन उनै काजीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभएको छ । ‘चुनाव हारेका मान्छेलाई बोकेर हिड्दा तपाईं घर न घाटको भइसक्नुभएको छ’ प्रसाईंले प्रचण्डलाई भन्नुभएको छ ‘अहिले त बेला बेला माइतीघरमा देखिदै हुनुहुन्छ तर एकदिन त्यो भन्दा टाढा पुग्नुहुनेछ । अनि तपाईं पछुताउनुहुनेछ ।’ उहाँले प्रचण्डलाई छाडेकोमा पछुतो नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
‘तपाईंले राज्य सत्ता विरुद्ध गरेको आन्दोलनको उपलब्धीमा काजीहरुले तर मारिरहेका छन् । यो कुरा जनताले थाहा पाएका छन् । त्यसको लेखाजोखा गर्छन् । बिचार गर्नुहोला प्रचण्डज्यू,’ प्रसाईंले भन्नुभएको छ ।
जनयुद्धका क्रममा आफूले सेनाको बंकरमा समेत बस्नु परेको अनुभव सुनाउदै प्रसाईंले ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहदा काजीहरु बद्नाम गर्न लागिपरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘तपाईंले राज्य सत्ता विरुद्ध गरेको आन्दोलनको उपलब्धीमा काजीहरुले तर मारिरहेका छन् । यो कुरा जनताले थाहा पाएका छन् । त्यसको लेखाजोखा गर्छन् । बिचार गर्नुहोला प्रचण्डज्यू,’ प्रसाईंले भन्नुभएको छ ।
पार्टीमा काजीहरुको प्रवेश भएपछि जनयुद्धका सहकर्मी बाबुरामहरु बाहिरिएको तथ्य पेस गर्दै प्रसाईंले प्रचण्डलाई सोध्नुभएको छ ‘काजीहरु पसेपछि तपाईंका गुरु किरणहरु कहाँ पुगे ? पार्टीमा सिन्को नभाँचेका काजीहरुले गर्दा पार्टीका कमाण्डर बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र विप्लवहरु कहाँ छन् थाहा छ ? त्यसकारण तपाईं काजीहरुको चंगुलबाट निस्कने हिम्मत गर्नुहोस् ।’
प्रचण्डलाई सुझाव : केपी ओलीसँग मिल्नुहोस्
प्रचण्डका धेरै वटा दुःखसुखका साथी र सहजकर्ता प्रसाईंले लोभिपापीको घेरा तोड्नु सुझाव दिनुभएको छ । यिनै लोभिपापीले घेरिरहने र आफूजस्ता शुभचिन्तकहरु सधैं पाखै पर्ने अवस्था आउँदा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य पनि सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रचण्डले आफ्नो भविष्य र राजनीति जोगाउने हो भने राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्यको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । ‘तपाईंलाई राजनीतिक भविष्यको आशा छ भने फराकिलो छाती भएका राष्ट्रवादी र चट्टानी अडान भएका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहकार्य गर्नुहोस्,’ प्रसाईंले भन्नुभएको छ, ‘यसका लागि तपाईंलाई केही अप्ठ्यारो छ भने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र म सहजीकरण गर्न तयार छौं । तपाईंहरु दुईजना मिल्नुको विकल्प छैन ।’
प्रचण्ड मिस हुने सुखद र दुखद कारण
२०७४ साल मंसिरको दुई गते । आज जस्तै बि एण्ड सी अस्पतालको आँगनमा हजारौं मानिसहरु आएका थिए । अस्पतालको उदघाटनमा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगै मञ्चमा बस्नु भएको थियो । चुनावी आमसभाहरुमा आएका मान्छेलाई पर्खाएर पनि उहाँहरु अस्पतालको उदघाटनका लागि समय दिनुभएको थियो । त्यस दिन दुवै नेताले सबैले देख्ने गरी रक्तचाप नाप्नु भएको थियो । अध्यक्ष ओलीको १३५÷९० र अध्यक्ष प्रचण्डको १३५÷८५ थियो रक्तचाप । प्रसाईंले तत्कालिन वाम गठबन्धनमा दुवै नेताको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो । चुनावमा विजयको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसदिन प्रसाईले नेपाली कांग्रेसलाई वाम नेताले भन्दा बढी गालीगलौज गरेर गठबन्धनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो । एक प्रकारले बि एण्ड सिको आँगन वाम गठबन्धनको चुनावी सभा जस्तो थियो । ओली र प्रचण्डको उपस्थितिले सुखद उत्सव पनि थियो त्यो ।
त्यस साँझ प्रचण्डको टिम बि एण्ड सीको अतिथि गृहमा बास बस्यो । भोलिपल्ट मंसिर तीन गते बिहान प्रचण्डलाई ‘मर्निङ वाक’मा लैजान प्रसाईं उहाँको कोठमा प्रवेश गर्नुभयो । बिहानको ६ नबज्दै जुत्ता लाएर हिड्न ठिक्क पर्नुभएका प्रचण्डको मोबाइलमा घण्टी बज्यो । फोनमा उताबाट के आवाज आयो । प्रचण्ड थचक्क भुइँमा बस्नुभयो । आतिएर प्रसाईंले सोध्दा प्रचण्डको मुखबाट नसोचेको कुरा बाहिरियो ‘प्रकाश बित्यो रे ।’ हो प्रचण्ड बि एण्ड सीमा सुतेको रात काठमाडौंमा छोरा प्रकाशको मृत्यु भएको थियो ।
‘दुवै जना अध्यक्ष आउनुको खुशी र प्रकाशजीको मृत्युको खबर दुवै हामीले बि एण्ड सीको आँगनमा देखेका र सुनेका थियौं । त्यसैले दुर्गा सरले प्रचण्डलाई आज मिस गर्नुभएको हो,’ अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमेश गिरीले भन्नुभयो ।